Maxkamad Talyaani ah oo magdhaw lacageed u xukuntay Xaashi Cumar Xasan – Kasmo Newspaper
Maxkamad Talyaani ah oo magdhaw lacageed u xukuntay Xaashi Cumar Xasan
Updated - March 31, 2018 3:14 pm GMT
London (Kasmo), Maxkamadda Degmada Perugia ee bartamaha Italy ayaa maalintii shalay u xukuntay Xaashi Cumar Xasan oo Soomaali ah, magdhaw lacageed oo gaaraya 3,181,000 oo Euro.
Cumar waxaa horey loogu edeeyay in uu ka tirsanaa kooxdii dishay gabar warfidiyeen ahayd, Ilaria Alpi iyo nin sawirrada qaada, Miran Hrovatin, oo lagu dilay Muqdisho 20 March 1994kii. Waxaana lagu xukumay xabsi 26 sano ah, 26kii Juun 2000.
Ninkaan waxaa markhaati been ah ku furaay nin kale, Axmad Cali Raage oo loo yaqaanno ‘Jeelle’ laakiin Maxkamadda ayaa 19kii Oktoobar 2016kii ka tuurtay Cumar dhammaan eedihii loo haystay, ka dib markii Jeele ka laabtay markhaatigii, isaga oo qirtay in laaluush la siiyay, si loo helo qof dusha loo saaro dilka gabadhaas.
Ilaria Alpi waxay ka tirsanayd Tvga Dawladda RAI qaybtiisa Tg3, waxayna daba socotay baaritaan xasaasi ah oo ku saabsanaa suntan lagu qubo xeebaha Soomaaliya xilligaas, taas oo dad badan su’aalo wali ka qabaan, mu’aamaraaddii lagu khaarajiyay.
In kasta oo Xaashi ka bari noqday, kiiska dilka Ilaria Alpi, isla markaana aan la hayn cid kale oo loo saariyo, Xeer-ilaalinta Rome ayaa ku tala jirta in la iska xereeyo gabi ahaantiiba, laakiin waxay ku xirantahay qaabka Garsooruhu uga gun gaari doono codsigaas oo dhagaysigiisu bilaaban doono 17ka April.